Ihe gbasara - BikeHike
Ịnya igwe, njem nlegharị anya igwe na njem ịnya igwe na-amasị gị?
Echiche weebụsaịtị - blọọgụ
BikeHike bụ ikpo okwu ebe m, onye hụrụ igwe n'anya na njem nlegharị anya igwe, na-ekerịta ozi bara uru na otu isiokwu.
N'otu oge ahụ, echiche nke saịtị ahụ bụ ime ka ndị nwere mmasị dị otú ahụ nwee ike ịdị n'otu, na-ekwurịta okwu na ịkekọrịta ozi bụ isi site na blọọgụ.
Nke a bụ isi ihe dị iche site na forums, ebe enweghị ọrụ dị mma maka nkwupụta onwe onye, ​​​​ebe ị nwere ike ịmepụta isiokwu, ị nwere ike ịdebanye aha na ya, ma ihe niile a ga-agbasasị n'ofe oghere ya. Mụ na anyị, a ga-echekwa echiche gị niile na echiche gị nke nnukwu oge n'otu ebe. Ị nwere ohere nke gị, nke ịchọrọ ịkọrọ ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ, site n'inye njikọ na enyi gị, ma ọ bụ na ịchọrọ ịhapụ ya naanị gị. M brewed ụfọdụ tii, were ụfọdụ buns, na oyi oge oyi, ị na-echeta otú ị nwere ọmarịcha oge n'oge okpomọkụ. Awụsara kola na ice n'ụbọchị okpomọkụ na-ekpo ọkụ ma mee ka ọ dị ọhụrụ ka ị na-agụ ihe omume oyi gị.
Nke a bụ ụdị akwụkwọ akụkọ onwe onye, ​​​​bụ naanị ezigara na obodo nke ndị nwere otu obi, n'ihi nke a ga-enweta nzaghachi dị egwu.
Iji mee nke a, naanị ị ga-edebanye aha, mgbe nke ahụ gasịrị ị nwere ike ịmalite blọọgụ nkeonwe gị.
Na-akwado maka njem igwe kwụ otu ebe
Saịtị ahụ nwere ozi nke, maka mmalite, na-akpali gị ịga njem mbụ igwe kwụ otu ebe, wee gwa gị ka ị ga-esi akwado ya. N'ebe a, ị ga-amụta ụzọ igwe kwụ otu ebe ị ga-aga, ihe ị ga-aga, otu esi ebu ya, otu esi ebu igwe, ihe ị ga-esi esi, wdg.
Anyị agaghị eleghara okwu nke ịhọrọ igwe kwụ otu ebe na ihe ndị ọzọ, ngwa, akụrụngwa. Dịka ọmụmaatụ, kedu igwefoto ka mma iji mee njem? Ọbụna ebe a enwere ọtụtụ ihe ị ga-atụle.
Gaba n'ihu. Ka ịgba ígwè bụrụ ihe bara uru ma ghara imerụ ahụ ike, ị kwesịrị ịmara onwe gị na usoro ịgba ígwè, họrọ nha igwe kwụ otu ebe ma mee ka ọ dị mma.
N'ezie, ị ga-enwe ike iji aka gị rụzie igwe kwụ otu ebe, na-elekọta ya ma na-elekọta ya. Edemede anyị ga-enyekwara gị aka inweta nka bara uru.
Ọ bụrụ na-amasị gị na saịtị ahụ, ọ bụrụ na ị na-ahụ atụmanya na mmepe nke obodo nke Fans nke n'èzí eme, ịnyịnya ígwè, ịgba ígwè njem nlegharị anya na ịgba ígwè, mgbe ahụ sonyere, na-akpọ enyi, na-ahapụ a njikọ na saịtị, ebe o kwere omume, na mgbe ahụ anyị nwere ike. na-arụsi ọrụ ike, kwalite ndụ ahụike, ee na naanị "ndụ ga-akawanye mma, ndụ ga-adịkwa ụtọ"
Ihe kacha mma na chioma!
Onye edemede BikeHike.